प्रवल गुरुङको प्रेममा करण जौहर ? – Mero Filmy
प्रवल गुरुङको प्रेममा करण जौहर ?
देश होस या बिदेश कुनै न कुनै रुपले नेपालीहरुले चर्चा र सफलता पाएकै छन् । हलिउड र बलिउडमा पनि बिस्तारै नेपालीहरुको पहुँच बढिरहेको छ । यस्ता केही नेपाली हस्तीहरु छन् जसले हलिउड र बलिउडमा पनि राम्रो स्थान बनाएका छन् । तीमध्ये पर्ने नाम हो प्रबल गुरुङ । फेसन डिजाईनरको रुपमा हलिउड र बलिउड दुबैमा चर्चामा रहेका प्रबलले तयार पारेका पहिरनहरु अमेरिकी प्रथम महिला मिसेल ओबामा संगै चर्चित भन्दा चर्चित हस्तीहरुले लगाएका छन् । उनले तयार पारेका पहिरनहरु लगाउन हलिउड र हलिउडका कलाकारहरुसमेत मरिहत्ते गर्छन् ।
चर्चित भन्दा चर्चित कलाकारहरु उनले तयार पारेको आर्कषण र युनिक पहिरनमा ठुला ठुला इभेन्टहरुमा जाने गर्छन् । आफुलाई समलिङगी भएको समेत घोषणा गरिसकेका प्रबलको प्रेमको चर्चा एकाएक सुरु भएको छ । त्यो पनि अरु कोहीसंग होईन बलिउडका चर्चित निर्माता एंव निर्देशक करण जौहरसंग । भयो के भने करण जौहरको हिजो परेको जन्मदिनको अवसरमा उनले इन्स्टाग्राममा करण जौहरसंगको तस्बिर सेयर गर्दै आफु करणसंग प्रेममा रहेको इंगित गरेका छन् । उनले लेखेका छन् “प्यार कियो तो डरना क्या । ह्यापी बर्थ डे केजो” ।
उनले यति लेखिरहँदा करणले पनि जवाफ दिएका छन “कन्ट्रोल योर सेल्फ भईया” । प्रबलको उक्त पोस्टपछि फ्यानहरुले उनलाई र करणलाई बधाई दिईरहेका छन् । हुन त करण जौहरले आफनो प्रेम सम्बन्धको बारेमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । तर प्रबलको पोस्टमा करणको जवाफ हेर्दा लाग्छ उनी अझै पनि आफनो प्रेम सम्बन्धको बारेमा खुलेर बोल्न चाहादैनन् ।
“मेमे नेपाल” बिरुद्ध उजुरी गर्न पुगे मिलन चाम्स
कान्समा प्रियंका :-“हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा”